Baddenden Joomcoil | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwa Ndị China Ọhụrụ akpọrepụ euro dị elu matrat kelered oryern. Ndị na-eme ihe nkiri na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie Ngwaahịa ahụ nwere mkpụrụ osisi siri ike. Ọ na-esiri ya ike na-egbu maramara nke na-enweghị ndị na-enweghị ala ma ọ bụ ọkọ. Euro ọhụrụ na-acha uhie uhie Raysson nwere ọtụtụ Manchinel akụkụ dị mfe. Ihe ndị a gụnyere pọmpụ, ndị na-ese ihe, ndị na-ekenye onyinye na ndị ọzọ welded na ihe ndị ọzọ.
Rayson etolitela ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọkachamara na onye na-eweta ihe a pụrụ ịdabere na ngwaahịa dị elu. Na usoro mmepụta ahụ dum, anyị na-eme ka usoro njikwa usoro nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị guzobere, anyị na-agbaso oge niile, njikwa sayensị, na ndozi na-aga n'ihu, ma na-enye ọrụ dị mma iji zute na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa ọhụrụ anyị na-agbachi obi m dị mma Miracoil ga-ewetara gị ọtụtụ uru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnata nyocha gị. Ahịhịa Squarediracoil na-etinye ego na mmepe ngwaahịa na ndozi ọrụ, anyị edobela aha dị elu na ahịa. Anyị na-ekwe nkwa inye onye ahịa ọ bụla ndị ahịa n'ụwa niile na ọrụ ọrụ aka na-ekpuchi ihe ndị ahịa, ahịa na ọrụ ahịa. N'agbanyeghị ebe ị nọ ma ọ bụ azụmahịa ị na-etinye aka, anyị ga-enwe mmasị inyere gị aka imeri okwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ gbasara matracom dị larịị nke ọhụrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.